Namonjy antsika tamin’ny fahafatesana mandrakizay i Kristy
"Ary Izy, no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao, ary mbola hanafaka ihany; eny, Izy no antenainay fa mbola hanafaka anay koa." 2 Kôr. 1:10.
Tonga tety an-tany ny Mpamonjintsika mba hiaritra tao anatin'ny toetra maha-olona Azy ireo fakam-panahy mpahazo ny olona. Nifampitana tamin'ny herin'ilay fahavalo fetsy izay tsy nanan-kevitra afa-tsy ny hamitaka sy hisarika ary hanimba Izy. Amin'ny maha-mpamonjy taranak'olombelona Azy dia nasainy niambina ny tsirairay mba tsy hikatsaka ireo zavatra mapanalavitra azy amin'ny lalana ety. Nanokatra lalana be voninahitra Izy ho an'ireo izay mandroso mankany amin'ny fitoerana any an-danitra, fitoerana izay omaniny ho an'ny olon-drehetra mivonona ho isan'ny fianakavian'ny Mpanjaka (...).
Novidin'i Kristy tamin´ny ainy ny zanak'olombelona rehetra. Maty tamin'ny fomba nahatsiravina Izy mba hanavotana ny zanak'olombelona tsy ho tratry ny fahafatesana mandrakizay. Nafoiny ny ainy tsy nisy pentipetina mba hananan'ny mpanota fiainana mifandraika amin'ny an´Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny nahafatesany no nanomezany lalana hahafahan´ny olona misaraka amin'ny Satana sy hiverina amin´Andriamanitra ary mahazo famelankeloka amin'ny alalan´ny mpamonjy (,,,).
Izy, ilay manana ny fahefana rehetra ety an-tany sy any an-danitra no hanarina indray ny fanahy izay mibebaka sy mino. Omeny hery ho tonga zanak Andriarnanitra ireo rehetra mandray Azy. Sarobidy ny fanahy tsirairay satria ny ainy mihitsy no efa nividianany azy mba tsy hisy ho very mandrakizay na dia iray aza.- L, t. 264, 1903.
Azon'ireo mpanompon'i Kristy atao, ary tokony hataony ny mandresy ny fakam-panahy rehetra. Izao no tokony holazainy: "Tsy tompon'ny tenako aho, efa novidina lafo tamin'ny ran'i Kristy aho. Ny sorona tsy misy fetra nataon'i Kristy ho ahy dia nampaherezany ahy hanome mihoatra noho izay angatahiny. Azy avokoa izay mahakasika ahy rehetra. Efa novidiny aho, ny tenako, ny saiko ary ny fanahiko. Ilainy ny androko sy ny fahaiza-manao ananako rehetra. GCB, 1Aprily 1899.
Tonga zanak'Andriamanitra ara-panahy ireo izay mandray sy mino Azy, Tafiditra ho anisan'i ankohonan'i mpanjaka izy ireo . Ary raha mikatsaka hatrany ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo dia manjary manam-pitoviana amin'ny endrik'Andriamanitra. 4L, t. 264,1903"